Amakhasino ase-inthanethi aku-inthanethi - Amakhodi weBhonasi Yekhasino aku-inthanethi
I-US Online Casinos
Posted on Kwangathi 11, 2019 Kwangathi 11, 2019 Umbhali Andrew	Amazwana Off kuma-US Online Casinos
Abalandeli beCasino banamakhasino angaphezu kuka-50 wokukhetha ifomu e-US, asakazeke ezweni lonke. Imizi eminingi emikhulu yase-US inekhasino okungenani elilodwa. Kodwa-ke, amakhasino amaningi ase-US atholakala ezindaweni zokungcebeleka nasemadolobheni e-spa, akhonjiswa ngegama elithi "Bad" (bath, spa) ekuqaleni kwamagama abo, njengeCasino Bad Ems edumile, eyaqala ngonyaka we-1720, noma ikhasino etholakala ogwini echibini elidumile eBad Wiessee. Ngemephu yawo wonke amakhasino ase-US, skrolela ezansi. Amakhasino ase-US ahluka kakhulu ekubukekeni nasekuzizweleni kwawo. Ezinye ziyinsimbi yesimanje nengilazi, kanti ezinye ziyizakhiwo zakudala zesigodlo. Kodwa-ke, amakhasino amaningi ase-US anikela ngemidlalo yasetafuleni yasekhasino yakudala, kufaka phakathi i-VideoSlots Games. Futhi, iningi Amakhasino ase-US ase-intanethi isakhiwo sokugembula futhi asihlinzeki okuningi ngokulandela uhlelo lokuzijabulisa. Kwamanye amakhasimende ase-US casinos kumele abe okungenani i-18 futhi abonise i-ID yesithombe evumelekile ukungena. Futhi, wonke amakhasino ase-US angewona ukubhema ngomthetho (okuthakazelisayo ukuthi ama-US afike nezixazululo ezithile zokubhema ezithakazelisayo, njengezicabha zokubhema ezifana nezingosi zefoni, eziseduze namatafula emidlalo). Ikhodi yokugqoka namahora wokuvula ahlukahluka, noma kunjalo, ezimweni eziningi amageyimu wethebula avulwa ngemva kwemini, kanti izintambo zingatholakala ngaphambi kwesikhathi. Lapha ungathola ulwazi oluphelele kuwo wonke ama-casino e-US. Ukuze uthole uhlu lwawo wonke amakhasino e-US
Isofthiwe nemidlalo etholakalayo
Dlala kuma-casino e-inthanethi okungenani imidlalo ye-casino elawulwa i-1.000 efanelekayo kumadivayisi edeskithophu namadivayisi eselula! Njalo i-casino e-intanethi inikeza iphothifoliyo ngemidlalo yekhasino. Futhi kuzo zonke i-casino yase-US e-intanethi uthola iphothifoliyo ehlukile. I-casino e-intanethi ikhetha ukuthi yimaphi imidlalo ayengezile kwiphothifoliyo yabo. Futhi banganezela kuphela imidlalo ethile lapho bevala isivumelwano nabahlinzeki bezemidlalo. Kunezinkampani ezilawulwa yi-100 ezakha imidlalo ye-casino e-inthanethi. Dlala kuphela kuma-casino e-intanethi enikeza imidlalo kusuka kubahlinzeki bemidlalo abalawulwayo. Yonke imidlalo evela kulaba bahlinzeki ihlolwe futhi ihlolwe ngamaKhomishane wamaGreyiya omhlaba wonke. Umhlinzeki wegeyimu ne-casino yase-US kuphela engangena umdlalo omusha lapho lo mdlalo uhlolwa uma ubuyela kwisilinganiso somdlali. Kunezinkinobho ezimbalwa ezakha imidlalo yazo yekhasino. Angiyona i-100% eqinisekile ukuthi le midlalo inokwethenjelwa. Zama ukugwema amakhasino akopisha imidlalo noma akha imidlalo yawo siqu. Ukubuyela kunani lomdlali kule midlalo kungahle kube ngaphansi kunezemidlalo elawulwayo. Sibukeza iphothifoliyo yemidlalo yazo zonke i-casino entsha e-inthanethi e-US. I-casino idinga ukuthi okungenani ibe ne-1.000 imidlalo elawulwayo. Futhi ikhasino nayo idinga ukunikela ngemidlalo ongayidlala kuthebhulethi noma kwi-smartphone yakho. Ukugembula kweselula kuthola ukuthandwa kakhulu. Okwamanje i-60% yabo bonke abadlali be-casino base-US basebenzisa idivayisi yeselula ngenkathi kugembula. Eminyakeni embalwa elandelayo leli phesenti lizokhula. Ohlu lwethu oluphezulu olulinganiselwe amakhasino ase-inthanethi e-US uthola amakhasino anemidlalo ye-casino engaphezulu kwe-500.
Khetha i-casino e-intanethi ebhaliwe e-US! Yonke ikhasino e-inthanethi oyitholayo kuyi-intanethi ibhalwe ngesiNgisi. Inani elikhethiwe lamakhasino liyatholakala nase-US. Uma ukhululekile nge-English ungakhetha amakhasino anikezela kuphela iwebhusayithi yabo ngesiNgisi. Uma ungalungile ngolimi lwesiNgisi sincoma ukuba udlale kuma-casino ama-best online ase-US esiwakhethile kuwebhusayithi yethu. Ohlu olunezinkinobho eziphakeme kakhulu ze-US uthola amakhasino nge-website ebhalwe e-US. Amakhasino anikeze ithuluzi lokusekela amakhasimende e-US.
Dlala kuma-casino e-intanethi enikeza izinketho zokukhokha okusheshayo! Kunezinkinobho ezimbalwa lapho ukukhokha imali kungaba ubuhlungu embongolo. Uma ujoyina i-casino e-intanethi futhi uwina imali ofuna ukuthola leyo mali ngokushesha ngangokunokwenzeka. Emakhasini ase-inthanethi kufanele uqinisekise i-akhawunti yakho njalo ngaphambi kokuthi ukhokhe imali. I-casino idinga ikhophi ye-id yakho nobufakazi bekheli. Ezingeni eliphezulu le-casino e-US le nqubo yokuqinisekisa ithatha amahora ambalwa. Sincoma ukuthi uqinisekise i-akhawunti yakho ngaphambi kokuthi uqale ukudlala imidlalo ye-casino. Nge-akhawunti eqinisekisiwe kulula futhi ngokushesha ukucela ukukhokha. Amakhasino ase-US kwiwebhsayithi yethu wonke anezinketho ezinkulu zokukhokha okusheshayo. Uma usebenzisa iTrustly, Skrill, Neteller noma Sofort uthola imali yakho kungakapheli amahora ambalwa. Ngokwethenjelwa uthola imali yakho kungakapheli imizuzu embalwa. Uma usebenzisa i-Credit Card noma i-Bank Transfer njengendlela yokukhokha owamukela imali yakho phakathi kwamahora we-24-48 ngemuva kokuthi ucele ukuhoxiswa kwakho.
Amakhodi wamabhonasi wekhasino amasha:
I-70 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino yedayimenti ku-Casino eyengeziwe
I-135 ayikho ibhonasi ye-deposit ku-SekaBet Casino
I-15 i-spin bonus ayikho e-PrimeFortune Casino
I-60 mahhala ayikho ibhonasi ye-deposit ku-Mrsmith Casino
I-75 yamahhala i-spin bonus e-Argo Casino
I-40 yamahhala i-casino e-SuperGaminator Casino
I-95 yamahhala e-Winzino Casino
I-40 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi ku-Dhoze Casino
I-35 yamahhala e-Anna Casino
I-140 mahhala i-spin bonus ku-ExtraSpel Casino
I-165 mahhala i-spin bonus e-Leovegas Casino
I-65 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino ediphithi eKaboo Casino
I-170 yamahhala i-spin bonus ku-Landing Ikhasi le-Casino
I-150 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi eBertil Casino
I-150 yamahhala i-spin bonus e-MoonBingo Casino
I-50 yamahhala i-casino e-Heroes Casino
I-105 yamahhala i-casino e-MondoFortuna Casino
I-20 ayikho ibhonasi yediphozi eMamamia Casino
I-45 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino edijithali e-Argo Casino
I-85 yamahhala e-Triobet Casino
I-115 ayikho ibhonasi yediphozi e-Redbet Casino
I-30 ayikho ibhonasi ye-deposit eCaribic Casino
I-175 ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi ku-LuckyDino Casino
I-120 yamahhala e-Diamond7 Casino
I-55 ayikho ibhonasi ye-deposit ku-Casino MoonGames
1 Isofthiwe nemidlalo etholakalayo
2 Ulimi lwewebhusayithi
3 Ukukhokha okusheshayo
6 Amakhodi wamabhonasi wekhasino amasha: